HADDII JACEYLKA LA WAAYO – Aminawehelie.me
Markaad rabto in aad ogaato, halkaad maalinba cag soo dhigtay, intaad dunidaan ku soo socotay si aad uga mid noqoto nafleyda ku dul nool iyo tan iyo berrigii aad ku soo biirtay ibna’aadanka yaacaya dusheedaba, waxeey kugu qaadaneysaa waqti dheer, waxeyse ku xiran tahay in aad adigu dooneyso in aad leexooyinka aad u mareyso ama soo gab-gaabsato ama sii dheer-dheereysato.
Bal dib u eeg, sideed dunidan ku timid? Inta aanad faaqidaada horey u gelin maskaxdana aadan ka sii dhalaalin, in yar intaad halkaas ku qabato, is weydii horta, INNABA NOLOSHAADU JACEYL LA’AAN MA JIRI LAHAYD?
Doodaas oon ogahay in qaar badan oo iminka maqaalkaan aqrinaya, ay xiiso la karkarayaan, isna heyn kari la’yihiin qodobka laga hadlayo muhiimkiisa darteed ayaad hadana waxaa dhici karta in aan isaga soo boodno jawaabta anagoon waxba si aad ah ugu fiirsan.
Laakiin wax deg-degsiiyo ku hagaagaba ma jiraane, si tartiib ah aan isugu dayno in aan u fekerno.
Ilaahey ayaa ina uumay, waa sax, aabbe iyo hooyo ayuu inoo yeelay, waa hubaal kale, deetana nolosheenii oo dhan buu ina hor dhigay, run weeye, ka bacdina halkaas ayuu inoo xugmay in aanu ka ambaqaadno waa biyo kala dhibcaan taasina, ka dibna maalinba si baanu soo ahayn, sax Iyana, deetana, deetana, deetana….
Haye, waxaasoo dhami waa sax waana rune, inabase ma isa soo gasheen adiga iyo jaceyl?? Wax lug ahse bahalkaas la sheeg-sheego ma kugu yeeshay?
Waxa la yiraahdo sal fudeydka ayaa adanaha lagu imtixaanay, waxaa laga yaabaa in aad kaba boodo waxyaabo badan oo dunida ku anfici lahaa, inaad aad iyo fiirsatana ay dani kuugu jiri lahayd, sida qaayibka ahna noloshu waxey ku macdahay inaad aad ugu dhugyeelato oo aadan dhayal iyo ciyaar kugu dhaafin joogisyada ay tahay in aad ku hakato si aad u dhiraandhiriso wadada mahuudan, ee ku hor taalla.
Haddii marka aan u soo dhaadhacno is daraasadeynteenii yarayd, ma kula tahay in aabahaa iyo hoyadaa is arki lahayn, kulmi lahayn, adiguna aadan dhalateen iyagoo bilaa jaceyl ah?
Mase dhici kartaa in badankeen aanu iska nimid dunida inagoon wax jaceyl ah ku dhalan?
Dad islaam ah baanu nahay, Diinteenana waa lagu weyneeyey jaceylka waxaana ku soo arooray aayaad badan iyo xadiisul qudsi, balse hadana waxaad moodaa in aanu si uga fara maran nahay, ama aanu isku diidsiineyno jiritaankiisa, ku dhaqankiisa iyo koolkoolintiisa, sidaasooy tahay kulligeen waanu u wada bugnaa oo hoostaas baanu ka wada rabnaa, in aan nolol jaceyl ka buuxo ku dhex harqano, kuna naaloono.
Nashaadka nolosha ayaa Jaceylka ku qiima leh, kuna dhisan, bal malee kiiyoo dunidaba laga wada suuliyo?
Side beey nolosheenu noqon lahayd, haddii argayda dugiga quraanka ku dhigan jiray ku wada nici lahayeen, qaar aad si u jeceshahayna aneey ku jiri lahayn? Ka waran hadaad daris is jecel aadan ku soo dhex korteen? Bal malee haddii aadan walaalahaa jeclaan lahayn, uwa waaweyn kuu turi lahayn adiguna aad ku taagsan lahayd kuwa kaa yaryar?
Ka waran miyaad guursan lahayd (waa hadaad guur gaartee) bilaa Jaceyl? Qoys is necebse ma jiri lahaa?
Maxaa bal marka dhici lahaa haddii jaceylka la waayo sidiisaba? Waxaa yaraan lahaa tiradda iyo kororka dadka, haddii dadku dunida ku yaraadana waxaa badan lahaa dugaagga, sidaasna dadka yar ee dunida ku nooli waxeey maaro isaga weyn lahaayeen dugaag ugaarsada, oo maf ka siiya, noloshooduna qatar beey ku jiri lahayd.
Dhanka kale waxaa badan lahaa cuduradda maskaxda ee cuqdada badan keena, waxaana kordhi lahaa xaasadnimada, lama heleen ibna aadan isu naxariista, is kaalmeeya, abaaraha iyo dhibaatooyinkana isaga gurmada.
Waxaa soo koobmi lahaa isku socodka dadyowga aduunka waxaa hoos u dhici lahaa ilbaxnimada bullaashay ee dunida, waxaa yaraan lahaa aqoonta, cilmiguna maba jireen, waayoo waxa aqoon iyo cilmi ah waxaay iminka ku dhasheen dad niyadooda Jaceyl ku jiro oo jecel in eey dunida wax qabsadaan, horuumarana ka shaqeeyaan.
Dadku waxey yeelan lahaayeen qalbiyo dhagaxyo ah oo aan debecsaneyn, dhego adag oon waxba maqlin iyo maskax aan fariimaha si waafi ah ugu gudbin jirka intiisa kale, sidaas darteed dadka qudhiisa ayaa dugaagoobi lahaa.
Diinta ayaa iyadana dhibaato ku imaan lahayd maadama iyada oo dhami ay ku dhisan tahay naxariis iyo nabad gelyo labadaasna waxaa fulin kara oo meel marin kara, dad taxiim ah oo qalbigoodu jilicsan yahay, waxa qabliga jilciyana jaceylkaa ugu horeeya, sidaad darteed ayaa dadku bilaa diin ku soo bixi lahayeen, cawaan iska nool ayeeyna ahaan lahaayeen, oo iyaga iyo dugaaggtu dunida ku hardamaan, wax kala celiyana aneey jirin.
Waxaa yaraan lahaa in xitaa qofku nolosha jeclaado, sidaasna waxaa qaribmi lahaa in qofku camal fiican sameysto inta uu nool yahay.
Waxaa dhamaan lahayd kalsoonida nolosha markaasna duniduba iska gabaabsi ayeey noqon lahayd, mana jirteen rajo nololeed oo muuqadata, hiigsi, iyo jiritaanba.
Lama heleen hogaamiyayaal maskax furan oo dunida ka taliya, in inta iminka colaadaha iyo madax adayga la soo taaganna waxaa dhici karta in eey yihiin kuwo bilaa Jaceyl ah oo maskaxda la fiila-feeroobay, sidaasna naxariistu uga suushay, dunida ilaa jaceylka ahna nocaas ayeey la soo bixi lahayd, sidaasna waxaa ku yaraan lahaa xasiloonida dunidda iyo wax wada qabsigeeda.
Geba-gebadii haddii jaceylka la waayo waxaa xilli hore idlaan lahayd dunida, inta ay sii jirtana wax macna muuqda ah lama aneey jirteen, maadaama ay dhexdeeda ku nool yihiin ummad is wad neceb oon noloshaba isu diidan.
Marka maadaama uu Jaceylku ka qoto dheer yahay sida aanu u heysano, waxaa hagaagsan in aan wayneyno nolosheenana ku larno, kuna dadaalno in aan mar kastaba qeyb ka siino, si jacayl badani innoo dhex maro, nolosheenana u noqoto mid dhisan koonkan dushiisana ugu noolaano innagoo ah dad nolosha isu ogol, biniaadmi ah, dhaqan aadamina leh, nolol fur-furanna aanu u helno iyo fursado innoo saamaxaya in aan garba fisano oo horuumarkeena ballaarino.
Reblogged this on garyaqaan2007 and commented:
Leave a Reply to garyaqaan2007 Cancel reply